မိန်းကလေး တစ်ယောက် အပျိုစစ်မစစ် တကယ်ပြောနိုင်လား – A Phaw Mon
မိန်းကလေး တစ်ယောက် အပျိုစစ်မစစ် တကယ်ပြောနိုင်လား
ဒီကိစ္စက ယောင်္ကျားလေးတွေကြားမှာ တော်တော်အပြောများတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ အပျိုစစ်မစစ်ဆိုတာကို ခန့်မှန်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတာက တကယ်ရော ဟုတ်နိုင်ပါ့မလား။ ပြီးတော့ အပျိုစင်မိန်းကလေးနဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်အတူနေရင် သွေးထွက်တယ်ဆိုတာကရော ခိုင်လုံတဲ့ အချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သလား။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေ၊ လှုပ်ရှားပုံတွေကို အပေါ်ယံလောက် ကြည့်ပြီး အပျိုစစ်မစစ် ပြောတာကတော့ မိန်းကလေးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို မလေးစားရာကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုခန့်မှန်းချက်တွေကို အမှန်လို့ ထင်မှတ်မှားနေသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီခန့်မှန်းချက်တွေဟာ တကယ်ရောအမှန်ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင်ဆိုတာကို သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီအချက်က အများစုလက်ခံထားတဲ့ အမှားကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက် လမ်းလျှောက်တဲ့ပုံက သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ပုံနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။ တင်ပါးရိုးဘယ်လော်ကကျယ်၊ ပေါင်ဘယ်လောက်တုတ်တယ် ဆိုတာတွေပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ဒီအချက်က မိန်းကလေးတစ်ယောက် အပျိုဟုတ်မဟုတ်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် လမ်းလျှောက်ပုံကြည့်ရုံနဲ့ ပြောလို့မရပါဘူး။
ယောင်္ကျားလေးတွေ စိတ်ပါလာတဲ့အခါမှာ လိင်တံထဲကို သွေးစီးဆင်းတဲ့အတွက် ထောင်မတ်တင်းမာလာသလိုပဲ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်သားဟာလည်း လိင်စိတ်နိုးကြားလာရင် တင်းမာပြီး အနည်းငယ်ကြီးလာတတ်ပါတယ်။ ဒါက အရေးမကြီးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရင်သားကြီးတိုင်း အပျိုမဟုတ်ဘူးလို့လည်း ပြောလို့မရပါဘူး။ အရပ်အမြင့်၊ ကိုယ်အလေးချိန်တွေပေါ်မှာ မူတည်သလို ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲတွေကြောင့်လည်း ရင်သားတွေရဲ့ အရွယ်အစားက ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရင်သားအရွယ်အစားကို ကြည့်ရုံနဲ့လည်း အပျိုစစ်မစစ်ပြောလို့မရပါဘူး။
ဒီအချက်သာ အမှန်ဆိုရင် လုံးဝန်းလှပတဲ့ တင်ပါးနဲ့ လမ်းလျှောက်နေတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို မြင်ရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အတူနေဖူးရုံနဲ့ တင်ပါးရဲ့ တင်းမာမှုက ပျက်စီးသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ တင်ပါးပြားနေပေမယ့် တစ်ခါမှ အတူမနေဖူးတဲ့ အပျိုစင်တွေလည်း ရှိပါတယ်။
၄။ အတူနေဖူးတဲ့ မိန်းကလေးတွေမှာ အကြည့်တစ်မျိုးရှိတတ်တယ် (မှား)
ဒီအချက်က ယောင်္ကျားလေးအများစုပြောတတ်ကြတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ကိစ္စပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အကြည့်က သူ့စိတ်အခြေအနေပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ အကြည့်လိုက်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ဖော်နေရတာကို ရှုပ်ထွေနေပါပြီ။
ဒီအချက်ကလည်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတစ်ခုပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရင်သားရဲ့ အရွယ်အစားနဲ့ အခြားအချက်အလက်တွေကို ကြည့်ပြီး အပျိုဟုတ်မဟုတ် ဆုံးဖြတ်လို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အခုခေတ်မှာ ရင်သားကို စိတ်တိုင်းကျပုံဖော်လို့ရတဲ့ နည်းပညာနဲ့ ဆေးဝါးတွေရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ရင်သားတွေ အပေါ်ထောင်ပြီး တင်းရင်းနေတိုင်း အပျိုစင်လေးပါလို့ ပြောလို့မရတော့ပါဘူး။
၆။ မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားက အမွှေးတွေ မရှိတော့ရင် အပျိုမဟုတ်ဘူး (မှား)
လုံးဝ လုံးဝကို အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတိုင်းလည်း မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားမှာ အမွှေးမရှိတတ်သလို အဲ့ဒီအမွှေးကလည်း အပျိုစစ်မစစ်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။
ပထမဆုံးအကြိမ် ချစ်တင်းနှောတဲ့ မိန်းကလေးတိုင်း သွေးထွက်သလား ? သွေးမထွက်ရင် အပျိုမစစ်ဘူးလား ?
ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အပျိုစင်အမှေးပါး (ပါကင်)နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နည်းနည်းလောက် ရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်။ အပျိုစင်အမှေးပါးဆိုတာက မိန်းကလေးအင်္ဂါဝကို ဖုံးအုပ်ကာကွယ်ထားတဲ့ အရေပြားအလွှာပါးလေးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ လုံးဝကြီးပိတ်ထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခါမှလိင်မဆက်ဆံဖူးတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ အတူနေတဲ့အခါမှာ ထိုအလွှာပါးလေးကို ဖြတ်သန်းသွားဖို့လိုပါတယ်။ ဖြည်းဖြည်းချင်း ညင်ညင်သာသာ တွန်းထိုးပေးခြင်းအားဖြင့် အလွှားပါးလေးမှာရှိတဲ့ အပေါက်ငယ်က သင့်ပစ္စည်းဝင်လို့ရလောက်တဲ့အထိ ကျယ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ပေါက်ပြဲသွားတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ သွေးထွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအမြှေးပါ ကျယ်လာတာ၊ ပေါက်ပြဲသွားတာမျိုးက အားကစားတွေလုပ်ရင်းနဲ့လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် မိန်းကလေးတိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အတူနေရင် သွေးထွက်မယ်လို့ မမှတ်ထားပါနဲ့။ အတူနေလို့ သွေးမထွက်ဘူးဆိုတိုင်းလည်း သူမက အပျိုမဟုတ်ဘူးလို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ သူမရဲ့အမြှေးပါးက လုံလောက်အောင် ကျယ်ထွက်နိုင်လို့ ဒါမှမဟုတ် အခြားအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ပေါက်ပြဲပြီးသားဖြစ်နေတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အပျိုစစ်မစစ်ဆိုတဲ့ကိစ္စက သင့်အတွက် အရမ်းအရေးကြီးနေတယ်ဆိုရင် နှစ်ဦးသား အကြေအလည်ဆွေးနွေးပါ။ ဒီဆွေးနွေးချက်က အဆင်ပြေပြေနဲ့ ပြီးသွားမယ်လို့တော့ မထင်ပါဘူး။